Hidhaan Haaromsaa boruu humna maddisiisu eegala
3 months ago 888 Qoodi
Torbanoota darbaniif yaalii gahumsa oomisha tarbaayinoota humna maddisiisan irratti godhame bu'aa milkaa'aa kan argamsiise Hidha Haaromsaa boruu Dilbata Gurraandhala 13 bara 2014 ifatti humna elektirikii maddisiisu akka eegalu maddeen himaniiru.
Gabaasa 'Wazema Radio'n guyyoota muraasa dura gabaaseen tarbaayinoota humna maddisiisan lama irratti bashaan lolaasuun yaaliin gahumsa taasifame milkaa'inaan xumuramuu hordofee hidhichi humna elektirikii marsaa jalqabaa maddisiisuuf gaheera.
Mootummaan hojii Hidha kana keessatti guyyaa seena qabeessa ta'e kana uummataaf ifa gochuuf qophii taasisaa kan jiru yoo ta'u guyyichatti iddoo hidhaan kun jirutti sagantaalee adda addaa akka jiran beekameera.
Ijaarsa Hidha kanaafi adeemsa guutiinsa bishaanii waggoottan dhufaniif kan itti fufu yoo ta'u, dhimma hidha kana irratti marii biyyoota Masrii fi Sudaan waliin godhamuus haala adda ta'een itti fufa jedhame eegama. Mariisistoota adda addaan waggootaaf kan itti fufe mariin kun waliigaltee malee rarra'e jira.
Hidhaan Haaromsaa ganna walitti aanan bara 2012 fi 2013tti bishaan qabateera. Ganna bara 2012tti hidhichi dheerina meetira 565 qabaachuuf bishaan kuubiik meetira biiliyoona 4.9 kan qabate yoo ta'u, bara 2013 ammoo mootummaan dheerina hidha kana fi bishaan dabalataan qabate ibsu baatuus kan milkaa'e akka ture ibsameera.
Ijaarsi Hidha Guddicha laga Abbayyaa erga jalqabame waggaa 11 guutuuf guyyoota muraasatu hafe.
Dec. 2, 2019, 11:27 a.m.
Mariin sadee Hidha Haaroomsa Kaayrootti gaggeeffamaa jira
Xiyyeeffannoon guddaa ijarsii hidha haaromsaa hojiiwwaan hafan irratti ta’uu ibsame